Xaalad argagax leh oo ka jirta Magaalada Baydhabo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Xaalad argagax leh oo ka jirta Magaalada Baydhabo
Xaalad argagax leh oo ka jirta Magaalada Baydhabo
Xaalad adag oo ka dhalatay xanuun-dhaliyaha Coronavirus ayaa ka taagan Magaalada Baydhabo, taa oo qayb ka ah mowjadda 2aad soo laba kacleynta cudurka ee dalka.
Guud ahaan magaalada ayaa laga dareemay saamaynta xanuunka, waxaana aad u korodhay tirada dadka xanuunkaasi ugu geeriyoonaya Xarunta Gobolka Baay.
Wasiirka Maaliyadda ee Koonfur Galbeed, Axmed Maxamed Xuseen ayaa sheegay in bishii February oo keliya ay 200 oo ruux xanuunka ugu geeriyoodeen Magaalada Baydhabo.
“Maanta ayaan booqday isbitaalka lagu karantiilo dadka uu soo rito cudurka Corona, aniga iska baarayo cudurkaas. Indhaheygu waxay qabteen bukaano badan oo jiifa, isla-markaasna Oxygen lagu xiray, si ay u neefsadaan. Bahda caafimaadku waxay ii sheegeen in cudurkan ay Magaalada Baydhabo ugu dhinteen dad tiradoodu kor u dhaafeyso illaa laba boqol oo qof, laga soo bilaabo bishii February ee la soo dhaafay. Dadka reer Baydhabo weli kuma baraarugsana khatarta cudurkan, ayagoo iska indha-tiraayo tilmaamaha iyo fariimaha caafimaad ee ay bixinayaan hay’adaha caafimaadka.” Ayuu yiri Wasiirka oo qoraalkan soo dhigay bartiisa Facebook.
Saraakiisha Caafimaadka ee ka hawlgala Magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya in dhimashada ay aad u korodhaay saddexdii toddobaad ee ugu dambeysay, maalintiina ay tobonaan qof xanuunka ugu geeriyoodaan magaaladaasi.
“Saddexdii isbuuc ee la soo dhaafay ayay dhimashada aad u laba-laabantay, soddon qof ka badan ayaa maalintii cudurkan ugu dhimato Magaalada Baydhabo. Waxaa jira dad soo kormeera meelaha dadka lagu aaso, dad aan soddon qof ka yarayn ayay soo xaqiijiyeen inay cudurka maalintii ugu dhintaan magaalada.” Ayuu yiri dhakhtar ka hawlgala Magaalada Baydhabo oo codsaday inaanan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan.
Marka laga soo taggo inaysan magaalada ka jirin wacyigelin in ku filan ah oo la xiriirta halista fayriska Corona ayaa waxaa haddana la soo sheegaya inuu aad u liito adeegga caafimaad, ee uu bixiyo xarunta bukaanada lagula tacaalo, oo ku taalo xaafadda Hawlwadaag.
Xaruntan oo ay gacanta ku hayaan Wasaaradda Caafimaadka ee Koonfur Galbeed iyo Hay’adda SOS ayaa waxaa ka jirta Oxygen la’aan, inta badan dadkuna iskuma hawlaan inay adeeg caafimaad u doontaan xaruntaasi.
“Xarunta dadka lagu karantiilo meel dad badan qaaddo ma’aha, waa goob yar, daryeel badan malahan, hal Oxygen ayaa yaalo, qofkii la geeyo inuu ku dhinto mooyee rajo badan lagama qabo in isagoo nool uu ka soo laabto. Taas marka waxay keentay in dadka ay ka door bidaan inay guryahooda isaga dhintaan.” Ayuu yiri Maxamed Mukhtaar oo ka mid ah dadka deegaanka.
Masaajidda Magaalada Baydhabo waxaa laga diiday in Salaadda Janaasada lagula tukado dadka ku geeriyooda magaaladaasi, sabab kasta oo ay u geeriyoodaanba. Guddiyada Masaajidda ayaa ku sheegaya in qof kastoo maanta ku dhinta Baydhabo uu u geeriyooday COVID-19.
Dhanka kale Guddiga La-socodka Xaaladaha COVID-19 ee Koonfur Galbeed ayaa Isniintii soo saaray awaamiir deegaanada Koonfur Galbeed looga mamnuucaayo gaadiidka Dhaweeyaha iyo Bajaajta.
Wasiirka Warfaafinta ee Koonfur Galbeed, Ilyaas Siciid Cali (Qalinle) oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Baydhabo ayaa sheegay laga bilaabo 24-ka illaa 27-ka bishan March in aanay deegaanada Koonfur Galbeed ka shaqayn karin Bajaajta iyo Dhaweeyaha, sababo ku aaddan iyagoo aan u hoggaansamin awaamiirtii ahayd inay darawalada xirtaan maaska afka iyo sanka lagu daboosho, rakaabkuna ay kala foggaadaan.
Tani ayaa durbaba ka careysiisay dadweynaha ku dhaqan Magaalada Baydhabo, bacdamaa ay gaadiidkan yihiin kuwa qura ee xilligan ka shaqeeya magaaladaasi.
Qaar ka mid ah dadka reer Baydhabo oo aan la hadalnay ayaa ku dooday in awaamiirtan ay sii cusleyn doonto caqabadaha markii horeba ka jiray magaalada.
“Sidaad la wada socotaan magaaladan waxaa ka shaqeeyo Dhaweeye iyo Bajaaj oo keliya, magaalada malahan gaadiid Ambulance ah oo dadka guryaha ugu tagga. Haddii hooyada uurka leh ay fool qabato, lug miyaa lagu gaynayaa isbitaalada? Waxay is leeyihiin COVID-19 xakameeya, laakiin dhibtii lee nagu saa’idinayaan.” Ayuu yiri Cali Aadan Ibraahim oo degan Baydhabo.
Arrimahan waxay imaanayaan, xilli aan Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay la gaarsiin tallaalka COVID-19, qaybta ay saamiga u heshay Koonfur Galbeed.
Previous articleMidowga Yurub oo u hanjabay Madaxda Soomaalida
Next articleGudoomiye Xaashi “Doorasho ma dhicin, khilaafkiina waa sii siyaaday”